Nabata na DAWN PAE
Nabata na DAWN na PAE elective. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara DAWN Clinic, Aga m akwado ka ị gụọ ya banyere chi ọbụbọ ibe ejikọrọ n'elu. Dị ka MS4 na ntuli aka PAE na DAWN, a ga -agwa gị ka ị were ọrụ onye nkuzi n'ụlọ ọgwụ. Ụfọdụ ọrụ ị ga -emeju gụnyere:
Na -akwadebe ụmụ akwụkwọ tupu ha abanye n'ime ụlọ na mkparịta ụka nke usoro ajụjụ ọnụ na usoro nyocha anụ ahụ metụtara okwu ha.
Gị na ụmụ akwụkwọ na -ekwurịta okwu ahụ mgbe ha zutere.
Inye aka na ndetu SOAP iji hụ na akwụkwọ ziri ezi na nke ọma.
Mgbe ụfọdụ ịhụ ndị ọrịa nwere ụmụ akwụkwọ obere ka “ọsọ ọsọ” nleta nlele.
Biko rụtụ aka na nkuzi usoro na kwaaji maka ihe akọwapụtara, n'ozuzu N'ezie chọrọ. Na mgbakwunye na ihe achọrọ, anyị na -arịọ ka ụmụ akwụkwọ PAE tinye aka na opekata mpe 4 nnọkọ na ụlọ ọgwụ DAWN. Biko bịarute 4:45 pm. N'otu oge ahụ 4 nnọkọ biko debanye aha maka a 5 min nzu ​​okwu (naanị otu onye nwere ike ịdebanye aha maka okwu nzu kwa ngbanwe). Biko rụtụ aka na usoro ọmụmụ maka ntuziaka. Ihe ngosi izizi a ga -eme n'oge mgbụsị akwụkwọ, nke na -amalite na 5:45 pm.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkagbu, ọ bụ gị ka ịhazi nwa akwụkwọ PAE ọzọ ka ọ bịa ụlọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụnọ abụọ, agaghị ekwe ka ị wepụta onwe gị na DAWN. Ị ga-enweta ọzụzụ na saịtị n'oge ngbanwe mbụ gị.
Kedu ka esi ahazi onwe gị
Jiri nke a google mpempe akwụkwọ iji gosi nnweta gị. Biko bịarute 5:30 pm. Biko gosi onwe gị na Onye isi akwụkwọ nwata akwụkwọ na onye njikwa azụ mgbe ị bịarutere, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ afọ ofufo nke mbụ biko jụọ ha maka ntụzịaka na saịtị ahụ. Ịkwesịrị ijide n'aka na gị na ndị ọrụ afọ ofufo ndị ọzọ maara DAWN ma ọ bụ gụchara ọzụzụ nọ ebe ahụ. Biko, naanị debanye aha maka mgbanwe ị na-ezube imezu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazigharị ma ọ bụ gbanwee, biko mee ya opekata mpe 48 awa tupu ụlọọgwụ ma ọ bụ gị ka ọ dị n'aka ịchọta MS4 ọzọ ị ga -aga. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụnọ abụọ, agaghị ekwe ka ị wepụta onwe gị na DAWN.
Ihe ndekọ ahụike elektrọnik
Na DAWN, we have transitioned to using Epic. MS4s agaghị ga -enye ohere EMR n'oge a. Ọ bụrụ na nke a agbanwe, anyị ga -eme ka ị mara. Members of the teams will have access to Epic and you can review the chart with the team before and after the visit.